လုပ်ငန်းခွင်မှာအောင်မြင်မှု | USAHello ထံမှဂျော့ဘ်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
သင်အောင်မြင်ကူညီရန်နှင့်အလုပ်မှာကောင်းသောအမှုကိုပြုမှမဆိုအလုပ်မှာသင်လုပ်နိုင်မှုအရာရှိပါတယ်. ဒီမှာပါ 10 သငျသညျအလုပျခှငျအောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်အကြံပေးချက်များ, ဘာပဲသင့်ရဲ့အလုပ်.
အလုပ်တစ်ခုရတဲ့အပေါ်ဂုဏ်ယူပါတယ်! အဖြစ်မကြာမီသင်စတင်အဖြစ်, သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်ကို. သငျသညျအနာဂတျမှာရာထူးတိုးရနိုင်အောင်သင်တစ်ဦးခက်လုပ်သားတွေဟာသင့်သူဌေးပြရန်.
1. သငျသညျနားမလညျဘူးဆိုရငျ, သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်အားပြော
တစ်ခုခုနားမလည်ဖို့အဆင်ပြေသည်. သငျသညျနားမလညျဘူးဆိုရငျ, သင့်ရဲ့သူဌေးကိုပြောပြ. သငျသညျအကြိမ်ပေါင်းများစွာမေးရန်မလိုအပ်ခဲ့လျှင်, မေးမြန်းခြင်းကိုစောင့်ရှောက်. သည်အခြားဒုက္ခသည်များသို့မဟုတ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သင့်ရဲ့အလုပ်မှာအလုပ်မလုပ်ခဲ့လျှင်, သင်ဘာသာပြန်ဆိုကူညီဖို့သူတို့ကိုမေးနိုငျ. အမေရိကန်အလုပ်ရှင်မေးခွန်းများအသုံးပြုကြသည်, သငျသညျသစ်ကိုဖြစ်ကြသည်အထူးသဖြင့်လာသောအခါ. မေးခွန်းများမေးကောင်းတစ်ဦးအလုပ်လုပ်နေသငျသညျရနျအရေးကွီးကွောငျးကိုထိုသူတို့ပြသ.
အချိန်ပေါ်ဖြစ်ခြင်းကို USA တွင်လုပ်ငန်းခွင်မှာအောင်မြင်မှုများအတွက်အရေးကြီးပါသည်. ဥပမာ, သင့်ရဲ့ပြောင်းကုန်ပြီမှာစတင်ပါလျှင် 3:30 ညနေ, သငျသညျအလုပျမှာဖြစ်သင့်, ဝတ်ဆင်ကအလုပ်လုပ်စတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေ 3:25 ညနေ. ဖော်ရွေ Be နှင့်သင်တို့အထဲ၌လာသောအခါသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှဟဲလိုပြောပါ. သို့သော်နံနက်ယံ၌အခြားသူများပြောနေတာသိပ်အချိန်မဖြုန်းပါနဲ့. အများစုကအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ်မကြာမီသူတို့အလုပ်ရအဖြစ်စတင်အလုပ်လုပ်.
3. သငျသညျစီစဉ်ထားသည်ဟုနေ့တိုင်းအလုပ်လုပ် Go
အပတ်တိုင်းသင့်ရဲ့အလုပ်အချိန်ဇယားကို Check နှင့်စီစဉ်ထားသည့်အခါလုပ်ကိုင်ဖို့လာ. သင့်ရဲ့ပြောင်းကုန်ပြီပြည့်စုံသည်အထိအလုပ်မှာနေဖို့. ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအစောပိုင်းအလုပ်စွန့်ခွာမနေပါနဲ့. အရေးပေါ်ရှိပါတယ်ရင်တောင်, သင့်ရဲ့ကြီးကြပ်ရေးမှူးပြောပြ (မရင့်မိတ်ဆွေတစ်ဦး) သငျသညျစွန့်ခွာမတိုင်မီ. သငျသညျကိုချွတ်ရက်ပေါင်းယူချင်သည့်အခါ, ရှေ့ဆက်အချိန်သင့်ရဲ့သူဌေးစကားပြော. သငျသညျရက်ချိန်းရှိပါက, သငျသညျထွက်ခွာပြန်လာမယ့်အခါသင့်ရဲ့သူဌေးကိုသိသေချာအောင်. တချို့ကအလုပ်အကိုင်အအသုံးပြုမှုကိုပြက္ခဒိန် (စက္ကူသို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်မှာ) လူတိုင်းအလုပ်လုပ်ရသောအခါပြသနိုင်ဖို့. သင့်ရဲ့အလုပ်ဟာပြက္ခဒိန်ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါက, သငျသညျကိုချွတ်ရှိသည်ရက်ပေါင်းအထိမ်းအမှတ်. သငျသညျအလုပျခှငျအောင်မြင်မှု၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ယူဆနေသည့်အခါဖွင့်ဖေါ်ပြသည်.
4. သင်နေမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်, အဖြစ်မကြာမီသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်သင့်သူဌေးကိုပြောပြ
နေမကောင်းဖြစ်ကြပြီးအလုပ်လက်လွတ်ဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင်, သင်သည်သင်၏စီစဉ်ထားအလုပ်အချိန်မရောက်မှီအသင့်အလုပ်ရှင်ကမခေါ်သင့်တယ်. သင်နေမကောင်းဖြစ်ကြပြီးအိမ်ပြန်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူတို့ကိုပြောပြပါ. တချို့ကမန်နေဂျာသူတို့ကိုသင်အီးမေးလ်ပို့သို့မဟုတ်စာတိုပို့ချင်ပေလိမ့်မည်. သငျသညျအဘယ်သို့ပြုရမည်သေချာမသိကြပါလျှင်, သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုမေး. လည်း, တိုင်းကုမ္ပဏီ paid နေမကောင်းရက်ပေါင်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအရေအတွက်ကရှိခဲ့. ကြောင်းငွေပမာဏထက်ပိုမယူတာအကောင်းဆုံးက.
သင့်ရဲ့သူဌေး၏လမ်းညွန် Follow. သူတို့တရားမဝင်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့သင်ပြောပြလျှင်သင်သည်သင်၏သူဌေးကပြောပါတယ်ဘာလုပ်မထားသင့်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်. သူတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာသာရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းပြချက်သင်မပွုနိုငျတစ်ခုခုလုပ်ဖို့သင်မေးခဲ့လျှင်, သငျသညျထိုသို့ပြုမှရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, သင်မူကားအဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြသင့်တယ်. သို့သော်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်ထင်မြင်ချက်များမျှဝေဖို့အဆင်ပြေကြောင်းသတိရ. သင်မျှဝေအပြုသဘောဆောင်သောအရာတို့ကိုရှိပါကအများစုမှာအကြီးအကဲတွေသင့်ထံမှစကားကိုနားထောငျခငျြ.
သင်တစ်ဦးယူနီဖောင်းရှိပါက, သင့်ရဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်နှင့်သန့်ရှင်းသောစောင့်ရှောက်. သင့်ရဲ့ယူနီဖောင်းသင်ဝတ်ဆင်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်လမ်းကိုဝတ်ဆင်. သင့်ရဲ့ယူနီဖောင်းလျှော် / သို့မဟုတ်တတ်နိုင်သမျှစင်ကြယ်သောကြောင့်စောင့်ရှောက်ဖို့သေချာပါစေ. သင်တစ်ဦးယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်မထားဘူးဆိုရင်, တူညီသောအဝတ်တစ်တန်းထဲမှာနှစ်ရက်ဝတ်ဆင်ကြဘူး. သငျသညျဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ဘယ်လိုသေချာမသိကြပါလျှင်, သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ဆင်တူအဝတ်အစားတွေကိုဝယ်. သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်ရန်ရှိပါက, သူတို့သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်ကွန်ဆာဗေးတစ်ဖြစ်ကြသည်သေချာအောင်. အချို့ကုမ္ပဏီတွေကပေါ့ပေါ့သောကြာနေ့ရှိ, အရာကိုသင် Non-စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်ရဆိုလိုတယ်.
သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်, သင်သည်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောတာဝန်များကိုပြုပါရန်တောင်းဆိုစေခြင်းငှါ. သင်တစ်ဦး store မှာတစ်ဦးငွေရှင်းကောင်တာတွင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့တာဝန်ဟာရေချိုးခန်းသန့်ရှင်းရေးပါဝင်နိုင်ပါသည်, ကြမ်းပြင် mopping နှင့်အမှိုက်ထုတ်ကိုယူပြီး. သငျသညျအားလပ်ရက်အပေါ်တစ်ဦးလုပ်ဖော်ရှိပါက, သင်သည်သူတို့၏တာဝန်အချို့ကိုလုပ်ဖို့ရှိစေခြင်းငှါ. အလုပ်၏ဤအမျိုးအစားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အပေါ်ဖြစ်ခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစအလုပ်မှာအောင်မြင်မှုရရန်မည်သို့မည်ပုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးအဖွဲ့သည်အလုပ်သမားရောက်နေတယ်ဆိုရင်, တစ်ဦးမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ်သည့်အခါသင့်ရဲ့မန်နေဂျာကြောင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်.
အတင်းအဖျင်းအနုတ်လက္ခဏာအမှုအရာဟူမူကားသို့မဟုတ်အခြားလူများနှင့်ပတ်သက်ပြီးပုဂ္ဂလိကသောအရာတို့ကိုပြောပြနေသည်. ဒီအလုပျမှာအမြဲတမ်းမကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲအချိန်ရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, အဲဒီလူကိုစကားပြော. သငျသညျတလျှောက်ရနိုင်ပုံကိုထုတ်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားပါ. သူတို့သည်သင့်စကားကိုနားထောငျခငျြဘူးဆိုရငျဒါမှမဟုတ်သူတို့အမျက်ထွက်ရလျှင်, သင့်ရဲ့မန်နေဂျာကိုပြောပြ. သူသို့မဟုတ်သူမသင်အချင်းချင်းစကားပြောကူညီနိုင်မည်အကြောင်း.
သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်နှောင့်ယှက်ကြောင်းခံစားရလျှင်, သို့မဟုတ်အလုပ်မှာ၎င်းတို့၏အပြုအမူကိုသင်မကောင်းတဲ့ခံစားရစေ, သင့်ရဲ့မန်နေဂျာနဲ့စကားပြော. သူတို့ကအခြေအနေက fix ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအနှုတ်လက္ခဏာအမှုအရာလို့ပြောဖို့လိုအပျပါလျှင်, မိသားစုသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးမှပြောဆို. သူတို့ကအကြံဉာဏ်ကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်နှငျ့သငျအလုပျမှာမည်သူမဆိုအတူကပြောသည်အဘယ်အရာကိုဝေမျှမည်မဟုတ်.
သင့်ရဲ့သူဌေးများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူရိုးသားဖို့အကောင်းဆုံးက. သင်တစ်ဦးအမှားလုပ်လိုလျှင်, ဒါကြောင့်အဆင်ပြေမယ့်. သင်အမှား လုပ်. သင်တို့ကိုဝမ်းနည်းဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ဆိုနိုင်. ဒီအခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့သင့်ရဲ့အိမ်မှာနိုင်ငံတွင်ပုံမှန်မဖွစျစခွေငျးငှါ. သို့သော်ဤသည်အလွန်အမေရိကန်အလုပ်ခွင်ထဲမှာတန်ဖိုး.
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သေစာအလုပ်ခွင်အတွက်အလွန်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်. သင်သည်ထိုသူတို့သုံးလျှင်, သငျသညျပစ်ခတ်ပါလိမ့်မည်. ကုမ္ပဏီအများအပြားမူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်တစ်သုညသည်းခံစိတ်မူဝါဒအရှိ. သင်ရုံတစျခုအချိန်ဖမ်းမိလျှင်ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်, သငျသညျပစ်ခတ်ပါလိမ့်မည်. သငျသညျအရက်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ကုမ္ပဏီပါတီမှာဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်တဦးတည်းသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုဖြည့်အချိုရည်များလိုလျှင်, ကြောင်းအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအရက်မလိုချင်ကြဘူးဆိုပါက, ကြောင်းအရမ်းအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်. သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်အဘယ်ကြောင့်မမေးခဲ့လျှင်, သစ္စာဝါဒီဖြစ်.
GlobalEnglish မှတဆင့်အွန်လိုင်းအခမဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်္ဂလိပ် Learn
ဟောင်းများဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ Sophia Vuelo မင်နီဆိုတာ၏ပထမဦးဆုံးအဘိဓါန် Hmong-အမေရိကန်တရားသူကြီးဖြစ်လာ